Vanoti mweya wemueni hauna kunzwisisa、asi hatigoni kubvumirana zvachose nemashoko.
Kazhinji kacho hatidi kungoona zviri pachena、tichizvifananidza kuti iri nyaya yemunhu oga kana chimwe chinhu chemhando.
Ichokwadi、mweya wevanhu hausi wema sezvaanoratidzika。 Iko nguva dzose yakagadzirira uye kunyange kuda kuzarura zvakavanzika zvayo kumunhu anovimba naye。 Semitemo、webhutheni dzemagariro dzine mawebsite mawo ega akazarurirwa kwekutaurirana、hukama hwevanhu uye zvimwe zvinhu zvakadaro。 kunze kwezvo、mawebsite webhupu anoshanda sechirongwa cheCVs chaiyo yevatenzi vavo。 Kazhinji kazhinji、kana iwe wakakorodza senyuchi、uchiona webhusaiti yemunhu、iwe unogona kutaurira zviri nyore pamusoro pemuridzi wepaiti pane zvaaida kutaura.
Mazuva aya ndinoshandisa Zita rakaderera kunyoresa uye kubata ose mazita angu domain。 Kune wega webhusaiti webhusaiti、inn ndinokurudzira kushandisa Hostinger Imwe-kunyanya nekuti ivo vane yakachipa yakachipera yakabatera webhusaiti（inotanga pamadhora 0.80 / mo）uye iri nyore kushandisa webhusaiti webhusaiti.
Hostinger yakagovana chirongwa chekutangisa inotanga pa $ 0.80 / mo chete-Yakakwana kune avo vari kutambira imwechete webhusaiti webhusaiti（shanyira Hostinger pamhepo）.
Kana uchinge uine nzvimbo yekuchengetedza webhusaiti uye kugadzirira kugadzirira、danho rinotevera nderekuti ita website yacho pachayo.
Edza kubudisa chimwe chinhu uye kuitora pawebhu。 Kunyatsogadzirisa uye kugadziridza kunogona kuuya mushure mokunge wadzidza unyanzvi hwako。 Imwe nzira iri nyore yekugadzira webhusaiti ndeyokushandisa WYSIWYG Webエディターse Adob​​e Dreamweaver CC。 Vatori vakadaro vanoshanda sezwi rinowanzoshandura izwi uye vanokubvumira kuti ugadzire nzvimbo yako yekuona pasina kutarisira zvakawanda zvekodhi.
もしHTML neCSS haisi chinhu chako、kana iwe unongoda nyore webhusaiti yega yega yekubvunzurudza kwako、saka zvichida dhizha-uye-drop web site builder ndiro sarudzo yakanaka.
Mazhinji makambani ekubata webhu anopa huwandu hwekudonsa-uye-kudonha sosi anovaka mahara。 Kana iwe usinei nebasa zvakanyanya nekutaridzika kana UX yenzvimbo、unogona kugadzira webhusaiti yako inoshanda muhafu neawa uchishandisa izvo zvemahara zvishandiso。 Neimwe nzira、iwe unogona kuruka iyo webhu dhizaini nekushandisa yakabhadhara ese-mu-one muvaki webhusaiti senge Wix uye Weebly。 Chinhu chakanakisa nezve izvi zvishandiso zvakabhadharwa zvakagadzirirwa vasina-techies。 Ivo vanowanzo kuve nyore kushandisa uye vanouya nemazana emamwe pre-yakagadzirirwa matemplate。 Iwe unogona kungotora pre-dhizaini theme uye woisa kune yako webhusaiti mune mashoma mashoma mashoma.
Heano mimwe mienzaniso yemawebhusaiti akavakwa neWix。 Iwe unogona zvakare kuda kutarisa kunze Wix yakavakirwa-mukati matemplate pano.
Nzvimbo yega yega yakagadzirwa naWix：Natalie Latinsky.
Yako saiti inogadzirwa neWix：Lera Mishurov.
Nzvimbo yega yega yakagadzirwa naWix：Rachel Fraser.
Kune avo vasina kujairika nemuvaki webhusaiti、ini ndinokurudzira kuverenga idzi tutorials pane yedu saiti masosi：
Handikwanise kunyatsokudzidzisa kuti ndeupi rudzi rwemukati rwemukati runofanira kuwedzerwa kune yako webhusaiti asi kuti ikubatsire iwe pakuongorora-bvunza mibvunzo iyi kwauri –
Chiichinangwa chewebsite yako yega？ Tsanangura uye uvake mararamiro ako pachako.
Ndivanaani vatsva vateereri vako？ Vadzidzi、vanogona kutengesa、vatengesi、nezvimwewo。イヴァジブ.
Ndezvipi zvinofanirwa-zvine ruzivo pane nzvimbo？ Jobho anonyora、mashoko okukurukura、zvigadzirwa zvemiti、nezvimwewo.
私はウノパ・セイ・イヨ・ルジボ？ Mifananidzo yemifananidzo、mafomu epepuru、mifananidzo、nezvimwewo。ユエクンヤンゲズビリナニ、タウラニャヤ.
Nguva dzose rangarira kuti kune ako ega mawebhusaiti、iwe uri rudzii。イタシュワイウェウノトラizvi zvakakomba uye wotumira mesejiイノウィリラナムバキティラコ。 Izvi zvinogona kutora fomu yeayo webhusaiti logo、makadhi ebhizinesi、kana chero chinhu chinoita sechinhu chakakosha se email yako siginecha.
Usanetseka kunyange sezvo izvi zviri zvinhu zvinogona nyore（uye nekukurumidza）kubatwa nekushandisa chero chinhu chakanaka chekugadzira mabhendi mumusika.
ペインzvakawanda zvaunogona kusarudza kubva pakuvaka yako webhusaiti yemahara。 Wix ineアカウントyemahara iyo inokutendera iwe kushandisa yavo kuvaka webhusaiti、apo 000Webhost inayo free web hosting zviripo.
Wega mawebhusaiti haisiri chinhu chakakosha asi sezvo iri nzvimbo huru yekugovana zvakawanda nezvezvaunofarira uye zvaunofarira、pane mukana wekuti ivo vatengesere ndikuitire imwe mari.
Chii chandinofanira kuisaペインヤングwebhusaiti?
Chinhu chakanakisisa pamusoro kugadzira webhusaiti zvekushandisa pachako kuti ndezvako zvekuita nezvaunoda。 Mamwe mazano ezvekugovera ndeyeブログyemunhu、mimwe mienzaniso yebasa rako、ruzivo nezvezvinhu zvaunofarira pamusoro pazvo、kana kunyange chako chairo chinzvimbo.
Kuva newebhusaiti yako pachako kunobatsira here桑名ばさ?
Kuve uine-waitwa-wakanaka、hunyanzvi hwekudyira nhoroondo inozobatsira kuti ubve kunve kwevanokwikwidza kumaforamu ekutora vanhu Kunze kwerusununguko rwekunyatsogadzirisa、uri kuratidzawo kutanga uhunyav hutanya uhunavu huyan yav ya yav yavu ya yav ya ya ya ya ya ya ya hu ya ya.
Izvi zvinoenderana nezvauri kufunga kushandisa webhusaiti yako。 Seyamuro yekubatsira vanhu、CV haisi kunze kwemubvunzo asi nhoroondo dziri dzepamunhu senge kero nenhamba dzekufambidzana dzinofanira kuderedzwa.
坂、私はunofarira kuunganidzwa kwangu？ Ndeupi airatidzika sekusika zvakanyanya kwauri？伊勢うのふんがチチノニャニャクコシャムマサイティエムンフ?
Ndapota shandisai izvi zvinyorwa uye zvaunofunga pamusoro pe Twitter（tenga pa @WebHostingJerry）。 Ndinovimba kuti kuunganidzwa uku kuchakubatsira iwe kuumba yako yega webhusaiti maererano nezvose zvemazuva ano.